တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ PUBG ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီလား ? | MyTech Myanmar
တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ PUBG ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီလား ?
ဒီသတင်းကတော့Reddit ပေါ်ကThread တစ်ခုမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတရုတ်ဂိမ်းဖိုရမ်ဖြစ်တဲ့NGA ကိုပြန်လည်ညွှန်းဆိုထားတယ်။အဆိုပါစာရင်းထဲမှာနိုင်ငံတကာမှာခေတ်စားနေတဲ့League of Legends, Overwatch, Fortnite တို့လိုနာမည်ကြီးဂိမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်။LOL, Overwatch, Diabloနဲ့World of Warcraft ဂိမ်းတွေဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘဲလက်ခံဆော့ကစားနေတဲ့ဂိမ်းစီးရီးကြီးတွေဖြစ်သော်လည်းကော်မတီအသစ်ကတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမှတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။
နောက်ထပ်Battle Royales ဂိမ်းအများစုဖြစ်တဲ့PUBG, Fortnite, H1Z1 တို့ဟာTencent ထုတ်Ring of Elysium နဲ့အတူပိတ်ပင်ခံရမယ့်စာရင်းထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဂိမ်းတွေကိုဘန်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကို“သွေးထွက်သံယိုမှု” အကြီးစားတွေပါဝင်နေကြောင်းပေးထားတာကြောင့်H1Z1 တို့လိုဂိမ်းတွေမှာနားလည်ပေးလို့ရပေမယ့်Fortnite ဟာသွေးထွက်သံယိုEffect တွေကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တာကြောင့်စဉ်းစားစရာပါပဲ။
Hi-Rez စတူဒီယိုရဲ့Paladins ကိုလည်း“အဖော်အချွတ်များတဲ့မိန်းကလေးဇာတ်ကောင်တွေ၊သွေးထွက်သံယိုမှုများနဲ့မသင့်တော်တဲ့အရာတွေ” ပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးဘန်းခဲ့ပါတယ်။Fortnite လိုပဲဒီဂိမ်းမှာလဲသွေးထွက်သံယိုEffect တွေမသုံးထားတာကြောင့်Overwatch ကိုသတိပေးရုံပဲပေးပြီးဒီဂိမ်းတွေကိုဘန်းတာဟာစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်လို့PCGamesN ဝက်ဆိုက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအရေးယူမှုမှာအထိနာဆုံးကတော့Blizzard နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီTencent တို့ပဲဖြစ်ပြီးPUBG, LoL, Paladinsဂိမ်းတွေမှာလည်းရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်းကြီးကြီးမားမားပါဝင်နေတဲ့Tencent ဟာအဲဒီဂိမ်းတွေကိုပါထည့်တွက်ရင်ဂိမ်း၂၀စာရင်းထဲမှာ၆နေရာထိပါဝင်ခဲ့တာပါ။Blizzard နဲ့NetEase တို့ကတော့သုံးလေးကြိမ်စီပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရဟာကလေးငယ်တွေကိုသွေးထွက်သံယိုတွေ၊အဖော်အချွတ်တွေနဲ့စာရိတ္တလွဲမှားစေတဲ့ဂိမ်းContent တွေမှကာကွယ်ပေးလိုပြီးမကြာသေးခင်ကလည်းအသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေရဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားချိန်ကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအဘန်းခံရတဲ့ဂိမ်းတွေကိုတရုတ်ဂိမ်မာတွေအနေနဲ့ဆက်ဆော့နေလို့ရနေတုန်းပဲလို့ဆိုပြီးBlizzard ကုမ္ပဏီကလည်းသူတို့သတိပေးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်Weibo အကောင့်မှာငြင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်အဆိုပါပို့စ်ကိုပြန်ဖျက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
Ref – PCGamesN
ဒီသတငျးကတော့Reddit ပျေါကThread တဈခုမှာပျေါထှကျလာခဲ့ပွီးတရုတျဂိမျးဖိုရမျဖွဈတဲ့NGA ကိုပွနျလညျညှနျးဆိုထားတယျ။အဆိုပါစာရငျးထဲမှာနိုငျငံတကာမှာခတျေစားနတေဲ့League of Legends, Overwatch, Fortnite တို့လိုနာမညျကွီးဂိမျးတှပေါဝငျပါတယျ။LOL, Overwatch, Diablo နဲ့World of Warcraft ဂိမျးတှဟောအခွားနိုငျငံတှမှောဘာပွဿနာမှ မရှိဘဲလကျခံဆော့ကစားနတေဲ့ဂိမျးစီးရီးကွီးတှဖွေဈသျောလညျးကျောမတီအသဈကတော့ပွငျဆငျဖို့လိုအပျကွောငျးမှတျခကျြခခြဲ့တယျလို့ဆိုတယျ။
နောကျထပျBattle Royales ဂိမျးအမြားစုဖွဈတဲ့PUBG, Fortnite, H1Z1 တို့ဟာTencent ထုတျRing of Elysium နဲ့အတူပိတျပငျခံရမယျ့စာရငျးထဲပါဝငျနတေယျလို့သိရပါတယျ။ဒီဂိမျးတှကေိုဘနျးရတဲ့အကွောငျးပွခကျြကို“သှေးထှကျသံယိုမှု” အကွီးစားတှပေါဝငျနကွေောငျးပေးထားတာကွောငျ့H1Z1 တို့လိုဂိမျးတှမှောနားလညျပေးလို့ရပမေယျ့Fortnite ဟာသှေးထှကျသံယိုEffect တှကေိုလုံးဝရှောငျကွဉျရာမှာနာမညျကွီးတဲ့ဂိမျးဖွဈတာကွောငျ့စဉျးစားစရာပါပဲ။
Hi-Rez စတူဒီယိုရဲ့Paladins ကိုလညျး“အဖျောအခြှတျမြားတဲ့မိနျးကလေးဇာတျကောငျတှေ၊သှေးထှကျသံယိုမှုမြားနဲ့မသငျ့တျောတဲ့အရာတှေ” ပါဝငျနတေယျဆိုပွီးဘနျးခဲ့ပါတယျ။Fortnite လိုပဲဒီဂိမျးမှာလဲသှေးထှကျသံယိုEffect တှမေသုံးထားတာကွောငျ့Overwatch ကိုသတိပေးရုံပဲပေးပွီးဒီဂိမျးတှကေိုဘနျးတာဟာစဉျးစားစရာဖွဈတယျလို့PCGamesN ဝကျဆိုကျကဖျောပွထားပါတယျ။
ဒီအရေးယူမှုမှာအထိနာဆုံးကတော့Blizzard နဲ့တရုတျကုမ်ပဏီTencent တို့ပဲဖွဈပွီးPUBG, LoL, Paladinsဂိမျးတှမှောလညျးရှယျယာရာခိုငျနှုနျးကွီးကွီးမားမားပါဝငျနတေဲ့Tencent ဟာအဲဒီဂိမျးတှကေိုပါထညျ့တှကျရငျဂိမျး၂၀စာရငျးထဲမှာ၆နရောထိပါဝငျခဲ့တာပါ။Blizzard နဲ့NetEase တို့ကတော့သုံးလေးကွိမျစီပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
တရုတျအစိုးရဟာကလေးငယျတှကေိုသှေးထှကျသံယိုတှေ၊အဖျောအခြှတျတှနေဲ့စာရိတ်တလှဲမှားစတေဲ့ဂိမျးContent တှမှေ ကာကှယျပေးလိုပွီးမကွာသေးခငျကလညျးအသကျမပွညျ့သေးတဲ့သူတှရေဲ့ဗီဒီယိုဂိမျးကစားခြိနျကိုလြှော့ခဖြို့ကွိုးစားခဲ့ပါသေးတယျ။လကျရှိမှာအဘနျးခံရတဲ့ဂိမျးတှကေိုတရုတျဂိမျမာတှအေနနေဲ့ဆကျဆော့နလေို့ရနတေုနျးပဲလို့ဆိုပွီးBlizzard ကုမ်ပဏီကလညျးသူတို့သတိပေးခံခဲ့ရတယျဆိုတာကိုတရားဝငျWeibo အကောငျ့မှာငွငျးဆိုခဲ့ပမေယျ့အဆိုပါပို့ဈကိုပွနျဖကျြသှားခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-12-14T01:46:17+06:30December 14th, 2018|Gaming|
Vivo ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ် iQOO ပွဲဦးထွက်စမတ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်
Hands-on ဓါတ်ပုံထွက်ပေါ်လာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Black Shark စမတ်ဖုန်းအသစ်